China amaphepha acrylic acrylic kunye nebala yePlexiglass mveliso kunye nabathengisi | IsiDonghua
CUmbala we-Acrylic Siiheets & Umbala we-Plexiglass, ii-Acrylic zeplastiki
Imibala ye-acrylic acrylic (i-plexiglass) amashiti alula, azinzile, anokuchaphazeleka, kwaye anikezela ngeempawu ezintle. Eziamashiti e-acrylic kulula ukuzenza, zinokuncanyathiselwa, zisikwe i-laser, zigrunjwe, zikrolwe, zikhazimlisiwe, zifudunyezwe kwaye zigotyiwe kwii-engile ezahlukileyo, zisenza sikwazi ukuvelisa nabuphi na ubungakanani kunye nawuphi na umbala kwizinto zorhwebo ezinomtsalane.
UDhua unikezela uluhlu olubanzi lweePlanga zePlexiglass Acrylic Sheets. Imibala eqaqambileyo ibandakanya obomvu, orenji, tyheli, luhlaza, mdaka, bhlowu, luhlaza okwesibhakabhaka, mfusa, mnyama, mhlophe kunye nembala yemibala. Zonke zinokunqunyulwa kwaye zifanelekile ukusika i-laser, ezenza ubuqhetseba beempawu, imiboniso yokuthenga, kunye noyilo lokukhanyisa ngokulula nangokufanelekileyo.
Igama lemveliso Iphepha le-acrylic elinemibala- “PMMA, Lucite, Acrylite, Perspex, Acrylic, Plexiglas, Optix”
Izinto eziphathekayo Iipesenti ezingama-100 zeNtombi eNdala
Ubungakanani 1220 * 1830mm / 1220x2440mm (48 * 72 kwi / 48 * 96 in)
Thickness 0.8 0.8 - 10 mm (0.031 kwi - 0.393 kwi)
Umbala Bomvu, orenji, tyheli, luhlaza, mdaka, luhlaza, blowu, mfusa, mnyama, ect emhlophe. Umbala wesiko uyafumaneka
Itekhnoloji Inkqubo yemveliso eyandisiweyo
MOQ Amashiti angama-300
Ukuhanjiswa Ixesha Iintsuku 10-15 emva oda isiqinisekiso
I-DHUA ye-Acrylic Sheet yenziwe ngokulula
Iphepha lethu le-acrylic eliguqukayo linokunqunyulwa ngokulula, lisarhwe, ligrunjwe, likhazimlisiwe, ligobile, lisebenze ngomatshini, libunjwe ngesamente kunye nesamente.
I-DHUA Hnjenge CUmbala Aicrylic Siiheets Aezifumanekayo phakathi Custom Sizes kunye Hewe
Iimveliso zephepha le-acrylic ezenziwe ngombala ezenziwe ngokwesiko zenziwe ngokwesiko, izinto zokuhombisa zeplastiki kwaye ziyafumaneka ngobuninzi bemibala.
Ubude obuCwangcisiweyo boSayizi kunye nobubanzi bonyamezelwano +/- 1/8 ″, kodwa zichanekile ngokuchanekileyo. Nceda unxibelelane nathi ukuba ufuna ukuchaneka okukhulu. Ukunyamezelana kwesinyithi se-Acrylic zi- +/- 10% kwaye zinokwahluka kulo lonke iphepha, kodwa umahluko ngokwesiqhelo ungaphantsi kwe-5%. Nceda ujonge kwizibizo zephepha ezingezantsi.
0.06 1.5 = 1.5mm
3/16 = 4.5mm = 0.177
Ukuguquguquka, ukungafihli okanye i-Opaque Coloured Acrylic Plexiglass Iyafumaneka
Sinikezela ngemibala ye-plexiglass ye-acrylic sheet kwindawo ebonakalayo ebonakalayo, eguqukayo, kunye nemibala e-opaque.
· Aclex Plexiglass = Imifanekiso inokujongwa kwiphepha (njengeglasi enombala)
I-Acrylic Plexiglass eguqukayo = UkuKhanya kunye neZithunzi kunokubonwa kwiphepha.
· I-Opaque Acrylic Plexiglass = Akukho kukhanya okanye imifanekiso ayinakubonwa kwiphepha elo.
Iphepha le-acrylic elenziwa ngeendlela ezahlukeneyo kunye neenjongo zonke, Iphepha le-acrylic elikhutshiweyo unentlobo ngeentlobo zezicelo kwiindawo zokuhlala ezininzi, ezorhwebo, ezamashishini kunye nezobuchwephesha.
Injengokubengezela, oonogada kunye namakhaka, imiqondiso, ukukhanya, ifreyim yesakhelo sokukhanya, ipaneli yesikhokelo sokukhanya, uphawu, intengiso, intengiso kunye nenqaku lokuthenga kunye nemiboniso yentengiso, iindawo zokubonisa ezorhwebo kunye neemeko zokubonisa, imida yekhabhathi kunye nezinye iiprojekthi zasekhaya ze-DIY. Uluhlu olulandelayo luyisampulu nje.
Imiqondiso, iibhodi ntetho
Ubugcisa begadi kunye nokuhonjiswa kwekhaya
Ukwahlula iipaneli zabucala
Ipaneli yokukhanya igubungela
Iishelufa ezingasemva, iishelfu zokuhombisa
Iphepha le-acrylic elandisiweyo liveliswa yinkqubo yokukhutshwa. Iipilisi ze-Acrylic resin zifudunyezwa kwisinyithi esinyibilikileyo esiqhutywa ngokuqhubekayo kwisitya sokufa, isikhundla esigqiba ubukhulu bephepha elivelisiweyo. Nje ukuba usweleke, ubunzima obutyhidiweyo buthoba ubushushu kwaye bunokuchetywa bunqunywe kubungakanani bephepha elifunekayo.
amashiti ombala we-acrylic
umbala wephepha le-acrylic
amaxabiso e-acrylic sheet
Iphepha elimnyama le-acrylic
iphepha elinombala we-acrylic plexiglass
iphepha le-acrylic elinemibala